July 2019 - Page4of 8 - Myanmar Fire Services Department
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်၊ (၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးလမ်း၊ လားရှိုးပန်းခြံ၊ အမှတ်(၂၀၆/က)နေအိမ်အတွင်း င� ....
admin | Jul 10, 2019 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
(၉.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၂၂ ၂၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်၊ (၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးလမ်း၊ လားရှိုးပန်းခြံ၊ အမှတ်(၂၀၆/က)နေ ပိုင်ရှင် ဦးဇော်လွင်သန်း၏ (၂၀×၄၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ အုတ်ညှပ်၊ ပျဉ်ထောင်(၂)ထပ်၏အောက်ထပ်ရှိ အိပ်ခန်းဒေါင့်တွင် လုံးပတ်(၁)လက်မခွဲ၊...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ညောင်စောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါက်တောကျေးရွာတွင် ချင်းတွင်းမြစ်တိုက်စား၍ ကမ်း ....
(၉.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၈ ၁၅)အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ညောင်စောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါက်တောကျေးရွာတွင် ချင်းတွင်းမြစ်တိုက်စား၍ ကမ်းပါးပြိုကျမှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၈ ၁၇)အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့် ရေစကြိုမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်(၁)စီး၊ သန္ဓေ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ သထုံလမ်းဘေးတွင် ပိတောက်ပင်လဲကျမှုသတင်း
(၉.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၅ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ သထုံလမ်းဘေးတွင် လုံးပတ်(၄)ပေ၊ အမြင့်(၃၀)ပေခန့် ပိတောက်ပင်သည် မိုးရွာမြေပွအမြစ်မခိုင်၍ တင်းနစ်ကွင်းထဲသို့ လဲကျမှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၆ ၂၅)အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်...
(၇.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊(၁၀ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်စျေးလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၈)နေ ဉာဏ်လင်းထက်သည် သူငယ်ချင်း(၅)ဦး တို့နှင့် အတူ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့သို့ မင်္ဂလာဆောင်သို့သွားရာ သမ္မာန်ဆိပ်တွင် ရေဆင်းကူးရာမှ ရေနစ်...
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ သိန်လုံ ကျေးရွာနေအိမ် မီးလောင်မှုသတင်း
admin | Jul 10, 2019 | News, မီးလောင်မှုသတင်း, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
(၉. ၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၉ ၅၀)အချိန်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ သိန်လုံ ကျေးရွာနေ အိမ်ရှင် ဦးလောဆောင်၏ (၂၅×၁၇)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ ခြေတံရှည် (၁)ထပ် နေအိမ်တွင် လူစောင့်မရှိဘဲ ဘုရားစင်တွင် ဖယောင်းတိုင်မီးပူဇော်ထားရာမှ အောက်ခံဘုရားစင်သို့ မီးကူးစက်လောင်...
Page4of 8« « Previous...23456...Next »